Sizing milina tohatra 180 degre
Kajy ny amin'ny ambaratonga tamin'ny 180-diplaoma swivel
Dingana eo amin'ny farany ambany ny kofehy P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Mamaritra ny lafiny ilaina
P - ny isan'ny dingana ao ambany diabe
Kajy ny amin'ny ambaratonga tamin'ny nifandimby ny 180° amin'ny sehatra fisaka
Na izany na tsy lavitra eo tohatra dia tsy maintsy ho dingana toy izany koa.
Amin'ity tranga ity, ny fipetrahana azo heverina ho dingana iray hafa.
Ampidiro ny haavon'ny haavon'ny ambany rihana tany ny haavon'ny rihana faharoa.
Mamaritra ny halavan'ny ny fanokafana - lavitra izay hitondra ny tohatra.
Dimensions azo manokana ao amin'ny metatra, millimeters sy ny santimetatra.
Fa ny fifantenana ny tandrify tsy hanahirana tohatra hanova ny isan'ny dingana, ary ny fandaharana dia hanome tolo-kevitra noho ny tsy hanahirana.
Nisy safidy - mba hiteraka mainty sy fotsy na loko sary.